Abantu abaningi abanesifiso imiqondo, buza: Ingabe hhayi omunye futhi zifana amahebezi nenhlebo? Kuyinto engenzeka ngempela amazwi ezimbili ezihlukene ngokuphelele. Nokho, abaningi abazi ukuthi banalo. Nokho, kuwufanele ngenkathi ukukutshela okwengeziwe mayelana umqondo ngamunye.
Mfushane definition inhlebo
Ngakho-ke, isiqalo - a amagama kancane. Gossip - iyona yenethiwekhi Imininingwane kuyinto ezikhathazayo. Lolo hide luqala ngo ukulimaza noma ubani kwethuka idumela lakhe elihle. Futhi ngokuvamile lokhu kwaziswa okungamanga, ngoba kusekelwe ulwazi olungalungile, ayilungile futhi ngamanga. "Inhlebo" - izwi isindala. Kwakubonakala isikhathi eside - eminyaka ambalwa adlule. Futhi hhayi nje esetshenziswa izincwadi, izingcaphuno, aphorisms kanye nezitatimende elikhulu. Omunye amazwi edume kakhulu Spanish kuyinto: "Ngubani Gossips nawe, inhlebo ngawe." Umlobi owaziwa futhi imbongi esthete XIX leminyaka Oskar Uayld wathi: "Ngezinye inhliziyo yonke inhlebo kuyinto okubi kahle kungase kutholakale." Ngisho ngesisekelo lezi izingcaphuno kungaba siqonde okushiwo leli gama.
Amahlebezi, inhlebo - basuke namanje ingafani? Eqinisweni, eziningi. Amahlebezi - kungcono ubufakazi nje ebonisa noma yimaphi amaqiniso ulwazi. umthombo wayo ongase angaziwa (ngokuvamile, futhi ngakho okungukuthi). Nokho, ulwazi ngokuvamile ezithakazelisayo. Futhi ngokuvamile, kusuka ekuqaleni asivelanga. Ukuze amahemuhemu wabonakala, udinga okuthile (isimo, isibonelo) uyakwazi ingqondo ke. Ngemva kwalokho, abantu baqala ukucabanga bese beveza enye inkondlo elama. Wayendlala. Ngokuvamile kubonakala sengathi lokhu. Wakwambula akubonile nakuzwile, wayesethi: "Kwakukhona amahemuhemu okuthi ..." - futhi kakade ukuyichaza umphakathi ngalesi simo.
amahemuhemu Ngasekuqaleni futhi idluliselwa ngendlela inhlebo, kodwa ke ayelapho abezindaba. Izimiso kwesimilo journalistic nokuziphatha nhlobo "ukuze sisebenzise 'emaphephandabeni, komagazini, emsakazweni naku-TV lolu lwazi. Nokho, kukhona tabloids ukuthi musa khumbulani nikwenza. Futhi sonke ngoba amahlebezi zakamuva, inhlebo - kungcono Imininingwane ihlazo, noma lowo oluthukuswe ngokucophelela. Kunzima (futhi ngezinye izikhathi ngisho engenakwenzeka) ukuqinisekisa, futhi kubalulekile ukuba abantu abafuna isinkwa futhi emasekisini.
Uma sikhuluma izimiso luyingxenye zokuziphatha ezisebenza kule nobuhlobo phakathi kwabantu, imiphumela lapha ngokuvamile banal. Le ndoda izwa ukuthi lwakhe lwezwakala umngane (maths) (a) amahemuhemu iqiniso noma sokuhleba frank ngakho, ngokuvamile iphula off ubudlelwane (nge nehlazo noma cha) kanye esimweni engcono ke musa ukweluleka abanye ukuze balondoloze ubuhlobo nalo muntu.
Kodwa uma konke okwenzeka ezingeni eliphakeme futhi isatshalaliswa abezindaba, kungaba nemiphumela wokuvelela okuningi. Wonke umuntu uyazi ukuthi amaphephandaba, omagazini ne-TV nomsakazo - amandla lesine. Zithanda noma zingathandi, kodwa iningi labantu ancike abezindaba. media Izitolo Abaningi bayisebenzisela ukwenza umsebenzi. "Maduze nje sizoba ukuphela kwezwe - ososayensi baye bafakazela ukuthi ngokusebenzisa zikufice meteorite ebulalayo usayizi emasontweni ambalwa Zomhlaba"; "Sithole ikhambi lengculaza futhi umdlavuza!"; "Izwe kwenye impi yezwe!" - lena kuphela ingxenye encane unhlokweni okuqondene isigaba amahemuhemu, inhlebo, futhi ayinangozi futhi ngisho nezinto abazijwayele.
Kodwa kukhona okubi nakakhulu. Futhi isijeziso esifanele. Ngokwesibonelo, i-amahemuhemu ukuthi kungabangela netwetwe kubantu, unswinyo eziphoqelelwe sempi. Uma konke kubi kakhulu, ngisho shot liguqubele. Gossip - lena eledlule, yini okudingeka iphendukele abezindaba.
Ukuguqulwa ukuzwa lokuthi
Ukuqinisekisa ulwazi ubufakazi ezidingekayo. Isibonelo okusobala kakhulu Akuzange kwaphela isikhathi eside kangaka edlule - ngo-2014. Kumayelana ezombusazwe. Ngo-February, abantu abaningi wathi: "eCrimea bayobuyela Russia!"; "Peninsula ayophinde yingxenye Russia!" - kodwa abaningi wayengakholwa ukuthi ngempela ngizoshada. Khona-ke lokhu amahemuhemu akuyona into kuye kwathonya lonke lelo zwe - lonke CIS kanye nezwe lonke. Kodwa lapho, ngo-March esimisiwe inhlolovo wambambela imemezele imiphumela, futhi wasayina amaphepha ukubuya enhlonhlweni ku Russian Federation, kuzobanjelwa khona ukulalela ngokuzenzekelayo ziba Empeleni.
Ngakho kwenzeka. Kodwa udinga uthwebule ngokucacile umehluko. Gossip - ulwazi isithunzi eqonda ngenjongo umuntu ubuhlungu. Ukuzwa okufanayo kungaqinisekiswa, futhi ngokuvamile basakaza enombono kuthakazelise izilaleli.
Indodakazi Dzhonni Deppa futhi Vanessa Paradis - Lily-Rouz Melodi Depp
Kanjani ukuhlola nokuthuthukisa amakhono ngemilingo